Nzira yekuvandudza sei zvigadzirwa zvangu pa Amazon nezwi search?
Product listings on Amazon uye izwi rekutsvaga zvimwe ndiyo mbiri mbiri dzekukwikwidzana kwako. Ndiri kureva kuti hutano hwekutora nzvimbo yako, tsanangudzo yemuzvigadzirwa uye nheyo yehutu hukuru pamusoro pekupa kwako - ivo vose vari kutarisana nekodzero yakakodzera yezvinyorwa uye kushandisa kwavo kwakakodzera. Saka, iwe unogona kutora muganhu pamusoro pemakwikwi muAmazambique neshoko rekutsvaga rinoshandisa nzira yakarurama. Uye ini ndiri kuenda kuzokuratidza humwe hutano hwakanaka hwakanaka kuti udzike mu ecommerce-yakagadziriswa keyword tsvakurudzo uye chikwata chinyorwa kugadzirisa - gislaved nordfrost 100 95th.
Asi tisati tatanga, ndinokurudzira kuva nekaviri-chengetedza kuti urege kuchengetedza nyaya dzinotevera:
Zita rekunyoresa, tsanangudzo yemagetsi, uye nhovo dzebhuti hazvive dzakapfuma nemashoko ekunyora uye mitsara yakareba yemisi mikuru.
Chikamu chimwe nechimwe chataurwa chinoratidzika zvakanyanya kuzadzwa nemashoko makuru, zvichiita kuti zvose zviwedzere.
Kuve nehuwandu hwemifananidzo kana hutsika hwekuona zviripo (ona kuti nemifananidzo imwe chete kana mbiri pamusikiriti haungambowaniki - ngatitarisei).
Asina ruzivo rwakakosha mune chikamu ne tsanangudzo yemagetsi kana mabhoti emunda.
Kana waita kuti zvinhu zvose zvivepo uye iwe pachako zvakagadziriswa, ndezvenguva yekuwana mikana inokurudzira kuAmazon neshoko rekutsvaga. Nenzira iyo, iwe uchada kuwana mufananidzo mukuru wezvinyorwa zvitsva mazwi makuru anoshandiswa nevashambadzi vepedyo. Kune rumwe rutivi, zvisinei, zvakakosha kuti unzwisise maitiro chaiwo eAmazon izwi tsvakurudzo yekuita zvakawanda kubva kune zvikumbiro zvemisi-refu zvinoshandiswa nevatengi vanogara kunze uko. Heino apo iyo inonyanya kukoshesa software software inopinda! Pakati pezvinhu zvakasiyana-siyana zvakasarudzika zvakasiyana-siyana, ndinogona kukurudzira vateereri vaviri vekutsvaga paIndaneti kuburikidza nekushandiswa-kunoratidzwa.
Merchant Words ibasa guru reAmazon word search. Iyo inogona kukubatsira kuti uende mberi nekuvandudza mapeji ako ezvigadzirwa kuitira kuti zvienzane nezvikumbiro zvechokwadi zve shopper. Pakupedzisira - kuratidzirwa pamusoro pekutsvaga kwakakodzera. Edzai Merchant Words kuti munzwisise chaizvo kuti mashoko akave neakawanda zvakadini kutsvaga kuti iwe ugadzirise. Cherechedza kuti sarudzo iyi yakagadzirirwa zvakananga ecommerce platforms uye mabhizinesi-kutumira mabhizimisi kunyanya. Pakati pemakona ayo akasimba, shanduro iri kuunganidza zvakare mazwi makuru anoshandiswa kwete chete paAmerica pachako asi inounganidza mitsara inoshandiswa pamusoro kune dzimwe nzvimbo seJet neWalmart.
Nyaya inogona kuva shamwari yakanaka yevatengesi vose vanotengesa kuAmazon. Chii chinowedzera - ichi chinhu chikuru uye chigadzirwa chekutsvakurudza chinoratidzira simba rayo guru kana iwe uchida kukosha kwekukwikwidza kwakakosha. Taura zviri nyore, Nyaya inogona kukubatsira kuti uone zvakanakisisa zvemashoko makuru ekugadzira uye kutsvaga mitsara inotungamira vatengesi veAmazambique vanowedzera. Panguva imwe chete, iyi sarudzo inogona kukuratidza iwe unogona kuita mazwi ekupa iwe uchipa mazano mazano pamusoro pezvinyorwa zvemashoko akakurumbira zvichida unofanirwa kunyatsocherechedza kwenguva. Nharaunda inewo yakasiyana-siyana inbuilt feature iyo inobvumira kugadzirisa PPC mishandirapamwe kuitira kuti ivo vari kumhanya pamutengo wavo wekuita zvakanyanya. Saka, usanonoka kuva nemuedzo uye uone kuti niches iri kumirira chii chakanaka yako yakagadziriswa mutengo. Rombo rakanaka!